Ama-FAQ we Inkampani
Wenzenjani ukuqinisekisa ikhwalithi imikhiqizo yakho?
Sesisungule esiphelele supply chain siqukethe ngokuqinile filtrated abathengisi kakhulu futhi umkhiqizo ngamunye ziyovivinywa ngaphambi kokushiya embonini yethu.
Ninazo izitifiketi olunesidingo emakethe yethu?
Yebo, yonke imikhiqizo yethu kukhona ETL / CETL / CE / RoHS / CEC isitifiketi. Singasho futhi isicelo isitifiketi ekhethekile edingekayo emakethe wakho.
Ingabe ukunikeza amasampuli? ingabe khulula noma cha?
Amasampula ziyatholakala kuwe, kodwa kufanele ikhokhwe. Siyabonga ngokuqonda kwakho ngomusa.
Kanjani imigomo yokukhokha?
T / T is kakhulu Kunconywa, PayPal /-Western Union / LC kanye neminye imibandela yokukhokha futhi eyamukelekayo
Ongayenza OEM kithi?
Yebo, sinikeza nge-OEM, ODM, OBM ukuhlangabezana nezidingo ezihlukahlukene ibhizinisi lakho.
kuyinto iwaranti yakho kanjani?
Sinikeza nge izinyanga 12 yesiqinisekiso kusukela izimpahla ushiye embonini yethu. Siphinde futhi sinikeze nge ukumaketha eside nangemva-ukudayiswa ukwesekwa, unjiniyela professional kuzosiza ukuncoma imikhiqizo ezifanele kunazo ngemva kokutadisha izidingo zamakhasimende akho, uphinde wenze ngendlela ofisa isixazululo noma iyiphi izicelo zakho ezikhethekile
Ama-FAQ we Imikhiqizo
Kungani futha yami imisebenzi ngomsindo omkhulu futhi motor liyovutha kakhulu?
Ngokuvamile kubangelwa ukuthuthwa enobudlova, le bents shaft futhi Rotor bazokwenza lokho nakuBafana nge stator lapho imoto iyasebenza. Sicela uhlole ukuthi iphakethe isesimweni esihle lapho futha yakho ifinyelela kuwena.
Kungani futha yami adonsa amanzi kancane?
Uma futha futhi kwenza umsindo ongaziwa lapho neze adonsa amanzi, sicela ukuqaqa futha futhi uhlole uma impeller is washaya by amatshe kancane. Lokhu kungase kwenzeke emadamini eyakhelwe entsha uma ufaka futha ngaphandle ahlanzekile wakhipha amatshe amancane. Uma akukho umsindo ongaziwa, sicela uhlole uma ozifakile kahle, lokhu kungase kwenzeke lapho imishini yakho cleaner ehluleka.
My futha motor wokushiswa, singakuchaza kanjani pho ukuthi kwenzeke?
Sicela uhlole ukuthi uke okungalungile olunezintambo voltage ngendlela ezimbili voltage futha.